China Runjin © Krunt ™ -EX800 Extrusion and Slicing Line ho an'ny fanamboarana sy fanamboarana gilasy | Runchen
Runjin © Krunt ™ -EX800 Extrusion and Slicing Line ho an'ny gilasy
Runchen © Expro ™ -EX800 dia ampiasaina hanamboarana gilasy karazana estrila sy gilasy famenoana karazana, ary izy io koa dia natao handravahana sy hanamafisana ireo vokatra gilasy. Ny karazana vokatra gilasy azo miovaova dia azo hamokarana miaraka amin'ny fitaovana fanampiny.
Karazana vokatra azo vokarina:
- Vokatra vita amin'ny tsorakazo - vokatra esorina - cone / kaopy gilasy - silaka - sakana - sandwich - mofomamy kely
Fitsipika Runchen © Expro ™ -EX800 ny tsipika fanosotra gilasy dia misy rafitra fampitana lozisialy fanodinana vokatra ary fitehirizana hatsiaka avy hatrany. Ny fidirana / fivoahan'ny vokatra dia napetraka eo alohan'ny fitehirizana hatsiaka avy hatrany ary mifandray amin'ny sehatry ny asa, mamorona rafitra fampitana boribory. Napetraka eo amin'ny sehatry ny asa ny fehezan-dalàna mahazatra mba hivoahana, hamenoana ary handravaka ny gilasy. Ao anatin'ny fitehirizana ny hatsiaka eo noho eo, ny rojo fandefasana dia miolakolaka amin'ny vatan'ny vy tsy misy fangarony roa.
Amin'ny maha-fomba fiasa voalohany azy, ny tsipika famokarana dia mamoaka ireo akora vita amin'ny ranomandry amin'ny fitoeram-bokatra (toy ny vokatra vita amin'ny tsorakazo, vokatra vita amin'ny slice na mofomamy kely), na mameno ireo akora vita amin'ny gilasy ao anaty kôzy efa nozaraina. . Ny sehatr'asa dia samy hafa ampiasaina amin'ny vokatra isan-karazany toy ny fitaovana fametahana tsorakazo, fitaovana fizarana biskoitra, fitaovana fizarana siligaoma, famenoana kônina miendrika baolina, gilasy voaravaka ambonyavo, karamela, ranom-boankazo, voamaina na voankazo maina. Avy eo, ny dabam-bokatra misy vokatra dia mandalo ny tionelina mangatsiaka eo noho eo ary mivaingana amin'ny rivotra mangatsiaka mivezivezy. Aorian'ny fihenan'ny vokatra gilasy, ny tanana mekanika dia hanala ireo vokatra ao anaty fitoeram-bokatra ary handemana sôkôla ary hanangona ireo vokatra.
Ny rafi-pitaterana rojo sy ny loharanon'ny herin'ny fitaovana rehetra eo amin'ny sehatry ny asa dia ao amin'ny tonelina mangatsiaka eo noho eo. Ny kodiarana mitondra ny rafitry ny fifindran'ny rojo sy ny vatan'ny mpamily eo ambanin'ny sehatry ny asa dia mifandray mivantana amin'ny hery lehibe.
Napetraka eo amin'ny sehatry ny asa ireo zana-kazo gara mba hampitaovana ireo singa miasa isan-karazany hamokarana vokatra manokana. Ireo zana-kazo fiantsonana ireo dia natao hifanakalozana iray hafa hamokatra karazana karazana extrusion na famenoana karazana. Ny habaka ivelany rehetra sy ny singa ao amin'ilay lampihazo dia vita amin'ny vy vy na fitaovana tsy misy fangarony.
Tunnel mangatsiaka eo noho eo
Ny tionelina mangatsiaka eo noho eo Runchen © Expro ™ -EX800 dia ahitana andiana trano fitahirizana mahaleo tena efa vita. Ny evaporator sy ny hafainganam-pandeha haingam-pandeha dia miorina amin'ny sisin'ny rafitry ny fifindran'ny rojo. Ao anatin'ny fitehirizana mangatsiaka eo noho eo, ny rojo fandefasana dia miolakolaka amin'ny vatan'ny vy tsy manara-penitra manamorona ny lalamby helikila roa. Ny faritra rehetra manohana ny rojo, ny kodia vy ary ny zana-kazo dia natao ho mora diovina sy tazonina. Eo anelanelan'ny rojo vy sy ny mpankafy dia lalantsara ho an'ny fikojakojana. Ny rafitra fihenjanana ampiasaina hanamboarana ny rojom-pandefasana dia mandinika tsara ny fiovan'ny maripana ao amin'ny tionelina mangatsiaka eo noho eo. Ny tontonana fitehirizana ny tonelina tsy misy hatak'andro dia vita amin'ny tontonana vy tsy misy fangarony miaraka amin'i PU ao anatiny. Ny tontonana fitehirizana ambany dia omena hady fanatsoahana.
Ny fiasan'ny kisendrasendra rehetra ao anatin'izany ny singa elektrika, ny famenoana ny asany ary ny firavahana amin'ny tany
Ny fiasan'ny gilasy dia fehezin'ny PLC amin'ny tontonana fanaraha-maso afovoany. Ny angon-drakitra famokarana rehetra dia azo atambatra, tantanana ary ahitsy mialoha eo amin'ny tontonana fanaraha-maso. Rehefa mifandray amin'ny solosaina fampiantranoana ny fitaovana hafa dia azo fehezina amin'ny programa hafa ny fitaovana.
Ny fenitra Runchen © Expro ™ -EX800 mihatra etona mangatsiaka amony. Amin'ny maha-singa azo avela azy, ny rafitra dia afaka mampihatra ny evaporator Freon ihany koa.
Runchen © Expro ™ -EX800 fitaovana fampitana vokatra dia natao manokana handefasana ireo vokatra misy tsorakazo. Izy io dia azo ampiasaina hanondrahana ireo vokatra vita amin'ny tsorakazo aorian'ny fanamafisana amin'ny sôkôla. Ny fitaovana dia miaraka amina tanana mekanika 185 sy tanky manondraka sôkôla mihetsika ary paompy mivezivezy sôkôla manokana.
Karazana vokatra Biscuitfizarana mijidinaextrusion Rodtonga dia mandefa radio Marindranofanapahana hihyfizarana
Rod-pluggedvokatra √ √ √ √
Sandwichvokatra √ √ √
silakavokatra √ √
Karazana vokatra Conefizarana Chocolatetifitra mitsitaitaikafamenoana Famenoana penina Topravaka
Kopa boribory √ √ √
Mofomamy kely √ √
Fahafahana (singa isaky ny ora)
Mofomamy gilasy: tsy misy firakotra
Sakano ny gilasy
Ny fahaiza-manao dia miankina amin'ny vokatra gilasy mahazatra miaraka amina endrika manaraka sy ny hafanan'ny etona -45 apor.
menaka vovoka tsy matavyronono Farysiramamy) Plasm glukosa Fitaovana fanampiny Votoatin'ny condensate Water Total
Ny fahaizan'ny vokatra slice dia mifototra amin'ny vokatra mahazatra miaraka amin'ny hatevin'ny 25 mm lehibe indrindra.
Ny fahaizan'ny cone tapered dia miankina amin'ny vokatra mahazatra miaraka amin'ny savaivony lehibe indrindra 60 mm.
Sehatra asa Fitehirizana ny
Fitehirizana ny fampangatsiahana
Lanja milanja kg 2.000 7.200 4.200
Lanja mavesatra kg 3.000 9.500 6.600
Savaivony ambony indrindra m 5,41 × 1,35 × 2.7 9.1 × 2,42 × 2.9 7,71 × 2,42 × 2.9
Previous: Runjin © Krunt ™ -N2000 Ice Cream Fangatahana Ice Cream
Manaraka: Runjin © Krunt ™ -RM35 Ice Cream Machine